How to formalabour organization "Do it yourself" Guide (အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံလမ်းညွှန်)
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်၊ အခြေခံအလုပ် သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ စည်းမျဉ်း။
Labour Organization Law (အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေ)
ဥပဒေ၏ အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ၊ အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်များ၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အလုပ်ပိတ်ခြင်းနှင့် သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ တားမြစ်ချက်များ၊ ပြစ်ဒဏ်များ။
Settlement of Labour Dispute Law (အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေး ဥပဒေ)
ဥပဒေ၏အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်၊ အလုပ်သမားရေးရာ လုပ်ငန်းညှိုနှိုင်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အငြင်းပွါးမှုညှိုနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အငြင်းပွါးမှုအား ဖြေရှင်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အတည်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်ခြင်း၊၊ တားမြစ် ချက်များ၊ ပြစ်ဒဏ်များ။
Decent Work (သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် - အိုင်အယ်(လ်)အို၏ ဦးစားပေး အစီအစဉ်လမ်းညွှန်)
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးနှင့် ILO ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံအလိုက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး မဟာဗျူ ဟာစာတမ်းများ၌ အဓိကပါဝင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး PRS စာတမ်းနှင့် သင့်လျှော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် အစီအစဉ်၊ ILO ၏ နည်းပညာပိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံအဆင့် စဉ်းစားရမည့် အချက်များ နိုင်ငံအဆင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ တွေ့ရှိချက်များ။
The Special 2013 issue of the World of Work magazine is packed full of articles reflecting the themes of this year’s International Labour Conference (ILC).
Freedom of Association Newsletter, June 2013
The ILO Freedom of Association Programme in Myanmar is now one year old and it is appropriate to reflect on what has been achieved in that time. If nothing else the fact that more than 600new unions have been registered points to success.
Labour migration (56) Child labour (55) Freedom of association and the right to collective bargaining (29) Labour market governance and working conditions (27) International Labour Standards (24) Safety and health at work (20) Social security (13) Working conditions (8) Green jobs (6)
Domestic workers (6) Equality and discrimination (4) Forced labour (4) Employers´ Organizations (4) Workers´ Organizations (2) Youth employment (2) Tripartism and social dialogue (1) Employment promotion (1)
Myanmar (286) Asia (55) Cambodia (36) Viet Nam (30) Indonesia (28) Thailand (27) Lao People's Democratic Republic (26) Malaysia (22) Singapore (20)
Philippines (20) Brunei Darussalam (15) Global (10) Bangladesh (5) India (5) Japan (4) Sri Lanka (4) Pakistan (4) Korea, Republic of (3) Fiji (3) Nepal (3) China (3) Solomon Islands (2) Mongolia (2) Vanuatu (2) Marshall Islands (1) Arab States (1) Cook Islands (1) Bhutan (1) Timor-Leste, Dem. Rep. of (1) Papua New Guinea (1) Micronesia (1) Samoa (1) New Zealand (1) Tuvalu (1) Australia (1) Kiribati (1) Tonga (1) Europe (1)